Ra’iisul wasaaraha Canada oo wasiirka socdaalka u magacaabay Axmed Xuseen oo Soomaali ah | RBC Radio
Ra’iisul wasaaraha Canada oo wasiirka socdaalka u magacaabay Axmed Xuseen oo Soomaali ah
Posted on January 11, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Ra’iisul wasaaraha dalka Canada,Justin Trudeau ayaa xilkii ugu sareeyay oo qof Soomaali ah uu ka qabanayo dalkaas u magacaabay, Axmed Xuseen oo ah nin asalkiisu yahay Soomaali.
Axmed Xuseen , waxaa loo magacaabay jagada wasiir buuxa isagoo noqonaya wasiirka socdaalka, qaxootiga iyo jinsiyadaha ee dalka Canada.
Magacaabista Axmed Xuseen, ayaa timid markii uu isku shaandheyn ku sameeyay golaha wasiirrada Canada ra’iisul wasaaraha dalkaas,waxuuna Axmed badalay wasiirki hore ee socdaalka John McCallum, kaasi oo loo magacaabay safiirka Canada u fadhin doona dalka Shiinaha.
Ra’iisul wasaaraha Canada,waxaa kalo uu magacaabay wasiirro kale kuwaaso xilalka loo dhiibay loo dhaariyay,waxaana si weyn dalka Canada looga soo dhaweeyay Axmed Xuseen oo soogalooti ah,balse hadda boqday wasiir buuxa.
Waxaa ay ahayd markii ugu horreeysay oo u kanay tagay isagoo qaxooti ah oo ka qaxay caasimadda Muqdisho,sanadkii 1996 ,waxana uu noqonayaa Axmed Xuseen qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo ka noqday wadamada dunida ugu horumarsan wasiir.
Axmed Xuseen,wasiirka socdaalka,qaxootiga iyo Jinsiyadaha Canada -waxbarashadiisa wuxuu ku qaatay dalka Canada,isagoo waxbarashadiisa dugsiga sare ku dhamaystey Hamilton waxana uu shahaadada BA ku qaatay Jaamacada York isagoo bartay Taariikhda,hase yeeshee Axmed ayaa waxbarashadiisii taqasuska ku qaatay Jaamacada Ottawa isagoo barta sharciyada bishii September 2012. Axmed Xuseen ayaa ah Aabbe dhalay labo carruur waana nin haysta diinta Islaamka.
Dalka Canada oo ay ku noolyihiin qaxooti badan oo ay Soomaali ka mid tahay ayaa magacaabista Axmed u arka wax weyn oo carruurtooda u noqon doonta taarikh ay ku daydaan.